Dhacdo sababtay dhimasho & dhaawac oo ka dhacday Walanweyn - Awdinle Online
Inta la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyooday mid kalena waa uu dhaawacmay kadib markii rasaas lagu furay goob ay ku sugnaayeen dadkaas oo ku taal degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellah Hoose.
Dhacdadaan ayaa waxaa ay ka dambeeysay, kadib markii wiil iyo Aabihiis ay isku qabsadeen Qoray AK47 taas oo keentay in dhowr xabadood ay ka dhacday qorayga taas oo dadka waxyeelada u geysatay.
Mid kamid ah dadka ku nool degmada Walanweyn ayaa sheegay in qaar kamid ah dadka ku nool degmada ay Aabaha uga dacwoodeen Wiilkiisa oo ka tirsan Ciidamada degmada Walanweyn, isla markaana Aabaha oo doonayay in uu Wiilkiisa si awood ah uga qaado Qoriga ay rasaas badan ka fakatay.
Qofka geeriyooday ayaa markii hore dhaawacisiisa oo aad u cuslaa loo soo qaaday magaalada muqdisho, balse intii uu wadada kusoo jiray uu geeriyooday, kaas oo lagu Magacaabi jiray Siid Cali Xuseen Cabdulle.
Taliyaha Booliska degmada Walanweyn Cabdalla Boorow ayaa Wariyeyaasha u sheegay in ay ku raad joogaan Aabaha iyo wiilkiisa oo sabab u ahaa falkaas, kuwaas oo goobta ka baxsaday.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay dhacdooyin lidi ku ah amniga sida, dagaal dhex-maray mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmada Walanweyn & laba maleeshiyo Beeleed.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay hub & xubno Shabaab ah
Next articleMaxay ka wada hadleen Sheekh Shariif & Guddoomiyaha Aqalka Sare?